होलीमा एनआईसी एशिया बैंकको शतप्रतिशत नगद फिर्ता अफर – Insurance Khabar
होलीमा एनआईसी एशिया बैंकको शतप्रतिशत नगद फिर्ता अफर
प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १६:५५
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले होली पर्वलाई लक्षित गरी यस बैंकका मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताहरूका लागि विशेष योजना अघि सारेको छ ।
यस योजना अन्तर्गत मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गरी यहि फागुन २६ र २७ गते कारोबार गर्दा २ सय जना भाग्यशाली ग्राहकहरूले १ सय प्रतिशत वा अधिकतम ५ हजार रुपैयाँ सम्म नगद फिर्ता प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
यसका साथै यस अघि पनि बैंकले यस्ता सुविधाहरु आफनो ग्राहकहरुलाई दिदै आएको जानकारी गराएको छ । जसअनुसार बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गर्दा मासिक १५ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म तथा डेबिट कार्ड प्रयोग गरी मासिक ६ हजारसम्म सम्मको छुट आफनो ग्राहकहरुलाई दिदै आएकोे बैंकले जनाएको छ ।
मोबाइल बैंकिङ्ग र डेबिट/ क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा अफरै अफर
प्रत्येक शुक्रबार बेलुकी ८ बजे देखी शनिबार बिहान ८ बजेसम्म संचालित ह्याप्पी आवरमा मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा प्रयोग गरी ५ प्रतिशत वा रू. १००/ सम्म क्यास ब्याक, पहिलोपटक विजुलीको बिल भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत वा रू. १,०००/ सम्म छुट, प्रत्येक बुधबार केएफसी तथा पिज्जा हटमा १० प्रतिशत क्यास ब्याक, प्रत्येक बुधबारबाट सामान खरिद गर्दा १० प्रतिशत वा रू. ५००/ सम्म छुट, सोनी ब्राभिया टेलिभिजन खरिद गर्दा १० प्रतिशत वा रू. २,०००/ सम्म छुट लगायत विभिन्न अफरहरू बैंकले सञ्चालन गरिरहेको छ ।
बैैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा प्रयोग गरी रिचार्ज गर्दा ३ प्रतिशत छुट पनि उपलब्ध छ । यसका अतिरिक्त बैैंकका ग्राहक महानुभावहरूले मोबाइल बैंकिङ्ग र डेबिट कार्ड प्रयोग गरी रू. २ हजार भन्दा बढी अस्पताल, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, डिपार्टमेन्ट स्टोर, लगायतमा अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएकोे छ ।
[email protected]ail.com (for news)